Katrina Kaif Iyo Iulia Vantur Oo Is Inkiray Tolow Ma Salman Khan Ayaa U Sabab Ah Colaada Labadan Gabdhod? - Hablaha Media Network
Katrina Kaif Iyo Iulia Vantur Oo Is Inkiray Tolow Ma Salman Khan Ayaa U Sabab Ah Colaada Labadan Gabdhod?
HMN:- Inkastoo aysan jirin arin cad ama qilaaf ka dhexeya Katrina iyo Iulia Vantur waxaa la yaab leh qaabka ay isku salaameen labadan gabdhood.
Goobtu waxay aheyd arooska Neil Nitin Mukesh iyo Rukmini Sahays arooskoda oo ay jilayaal badan kasoo qyeb galeen sida Amitha Bachchan, Jaya bachchan, Salman khan, Katrina Kaif, Bipasha Basu, Karan Singh Grover, Jackie Shroff, Randhir kapoor , lulia vantur, Pooja hedge iyo kuwa kaloo badan.
Goobta waxay aheed mid camiran jilayaalkana mid mid u imaanayeen, wixii baashaalka socdaba waxa halmar soo gashay Katrina kaif halka ay Iulia Vantur ay siibaxesay malaha wey isdhaafeen?
iulia vantur at neil nitin mukesh wedding reception
Iulia Vantur waxay ku timid dhar madow ah oo il qabad leh waxayna xaflada joogtay hal saac iyo bar ayado farxad kamuuqatay.
Daqiiqadihii dadka shaki galiyay waxaa is kusoo toosay bixitaankii Iulia Vantur iyo soo galistii Katrina iyadoo ku timid saari.
Waxaa kasii dambeeyay salman khan labadoodaba inkasto uusan la kulmin midna, midaas oo ka dhigan in Salman waqtigiisa xaflada dad kale la qaatay.
Dhanka shaqada salman waxaa laga suugaba waa filimka Tubelight uu iska leeyahay Kabir Khan kaaso ladaawan doono Ciidul Fidriga.
Katrina Iyadana waxay soo wada jagga jasos o ay la hogaamineso Ranbir Kapoor iyo waliba filimka Tiger Zinda Hai oo ay la wado Salman Khan.
Dhanka kale Iulia Vantur ayaa iyada waxay soo wadaa Album hees. Heeskaaso uu iskaleeyahay Himesh Reshmeya waxayna ku jirta albumkisa lagu magacaabo Aap Se Mauslique.